Ngenze iphutha emlandweni wami we-New Jersey Foreclosed Case Manje? - I-NJ & NY Real Estate, i-Probate, i-Foreclosure Defense kanye ne-Bankruptcy Lawyers
Ikhaya / Blog / Ukuvikelwa Kwemboni YeNew York / Ngenze iphutha emlandweni wami we-New Jersey Foreclosed Case. Manje?
Mashi 21, 2016 Ukuvikelwa Kwemboni YeNew York, Isaziso sokubonakala1 CommentUVeer Patel
Isaziso Sokubukeka esisha se-New Jersey futhi senziwa kabusha e-New Jersey Foreclosed Case
Utshelwe ukuthi uku ezenzakalelayo ecaleni lakho lokudalulwa eNew York.
Ngakho-ke, kungenzeka ukuthi uzibuza ukuthi kwenzeka kanjani lokhu, nokuthi kusho ukuthini kuwe. Uma obolekayo engafaki mpendulo ngemali yokugcwalisa engu- $ 175 kungakapheli izinsuku ze-35, obolekayo angafuna ukwehlisa iqembu uhlangothi. Emacaleni okumbulwa kwembeswa eNew Jersey, ibhange lingafuna iphutha lommangalelwa ngokuthumela isicelo esisemthethweni kumabhalane wokungena. Kufanele ibe nemininingwane yokuthi ummangalelwa wasetshenziswa kanjani. Lolu hlelo lokusebenza kumele lwenziwe kungakapheli izinyanga ze-6, noma kuzodingeka ukunyakaza. Imiphumela yokuyeka ukusebenza ngokweqile ingaba yinhle ngokumelene nalowo obolekayo.
Ngingalulungisa kanjani icala lami le-New Jersey Foreclosure?
Ukuphela kwendlela yokulungisa noma yokulungisa okuzenzakalelayo kungaba ukufaka ifayela lokuphuma elikudinga ngokuvamile,
I-1. Ukuthi kunesizathu esihle, futhi;
I-2. Ukuthi kukhona ukuzivikela okuhle ngokuchasene nesenzo sokwembulwa kwembeswa.
Izinkantolo zikhiphe isinqumo esivulekile esivuna abavikeli, nokho; kumele kwenziwe umzamo omkhulu phambi kwenkantolo okukhombisa ukuthi kungani umsolwa obolekayo engaphendulanga ngesikhathi lapho ephikisana nesikhalazo sokwembulwa kwembeswa kweNW.
Ingabe kufanele ngizindle ekumboniselweni kwami ​​kwe-NJ?
Yini ISaziso Sokubukeka eNew York?
Uma kungene iphutha, futhi umuntu engakhombisi isizathu esihle noma ukuzivikela okuhle, kungaba ukuhlakanipha ukukhuluma nommeli waseNew York Foreclosure ngokufaka isaziso sokubonakala. Lo mbhalo osemthethweni ufuna ukuba yonke imibhalo idluliselwe ephathini, noma kungenzeka ukuthi iqembu alizange lifake isicelo sokuvula ngokusemthethweni. Inzuzo yokugcwalisa ukubukeka yilowo obolekayo enelungelo lokuthola noma yimiphi imibhalo ephathelene nesicelo sesahlulelo sokugcina. Uma kunikezwe isaziso, isicelo singenziwa kumahluleli ukuze abeke eceleni isahlulelo. Ngaphezu kwalokho, lapho kuthengiswa kuhleliwe, Obolekayo obolekayo kufanele athole nezinye izaziso ezidingeka yimithetho yenkantolo.
Noma ungaphendulanga impendulo ngesikhathi, kukhona izinto ezingenziwa zivikele ekwambulekeni. Usengakwazi ukufaka ifayela ukunyakaza kokuzenzakalelayo noma ukufaka isaziso sokubukeka. Kukhona nezinye izinketho. Kuya ngokuthi inqubo iqhubeka isikhathi esingakanani futhi namaqiniso athile ecaleni lakho, izindlela zingatholakala. Khuluma nomunye wabameli bethu bembazo ePatel Soltis naseCardenas namhlanje ukubona ukuthi yini ngempela engenziwa kuwe. Amahhovisi ethu atholakala e574 Newark Ave., Ste 307., EJersey City, NJ 07306.
Le blog ayihloselwe njengeseluleko sezomthetho futhi akufanele uthembele kuyo. Kufanele uthintane nommeli ukuze uthole ukwelulekwa okuqondene namaqiniso amacala akho.
Ngubani othola isheke lerenti? - Ukuqokwa koMamukeli WeRent
Yini Isenzo Esinqunyelwe Ukufika Kwengane? Futhi, ngiyakufanelekela?
Apreli 17, 2016 at 6: 12 pm
Sawubona webhusayithi epholile kakhulu !!